7 အဘို့ရလဒ် uncle grandpa
ဘထွေးဘိုးဘိုး sneakin Santa
Sneakin '' စန်တာခုနှစ်တွင်ဦးလေးအဘိုး breakdancing ၏တန်ခိုးအားဖြင့်ခရစ္စမတ်ကယ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဦးလေးအဘိုးရဲ့အစ်ကို, စန်တာ Claus, သူ့ခြေထောက်ချိုးလိုက်တဲ့အခါခရစ္စမတ်ပျက်စီးသည်ကဲ့သို့, လှပါတယ်။ ကံကောင်းတာက, UG နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများနေ့ကိုကယ်ဖို့ရှိပါတယ်။ သို့သော်မကယ်မလွှတ်
'' Santa sneakin ဘထွေးဘိုးဘိုး
ဦးလေးအဘိုး Sneakin '' စန်တာဝေမျှမယ်သင့်ရဲ့ Sneakin '' စန်တာအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်။ ofunnygames.com မှာအခမဲ့ဦးလေးအဘိုးဂိမ်း Play ။
သင်သည်သင်၏အဆွေတို့အဘို့ရှာဖွေအဖြစ်မဆင်မခြင်လမ်းခရီးစဉ်လိုက်တယ်မိကျောင်းနှင့်ဂြိုလ်သားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆန့်ကျင်သငျသညျတှငျး။ ဦးလေးအဘိုးက interdimensional လမ်းခရီးစဉ်အပေါ်လေးတွေတစည်းကို ယူ. ဖို့ပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်ယခုသူကလေးတွေခြေရာခံပျောက်ဆုံးရဲ့အဖြစ်
Ride the moto along the road, avoiding dangerous obstacles.
အဆိုပါကမ္ဘာစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်ရှင်သန်ရန်တိုင်းတိုက်ကြီးအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းကိုတိုက်ကြပြီ။ ကိုယ့်တစ်ဦးပစ္စတိုနှင့်အတူ Start နှင့်သင်၏ရှေးခယျြမှု၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ကြီးမှတဆင့်ချီတက်။ လမ်းတစ်လျှောက်ကသင့်အားသာချက်အားစစ်ရေးမော်တော်ယာဉ်များကိုသုံးနိုင်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Survival Keep
ခရစ္စမတ်ညတွင် Rigby နှင့်မော်ဒကဲသည်စန်တာ Claus ကမ္ဘာတဝှမ်းအမြိုးသားအဖို့ဆုလက်ဆောင်သေတ္တာများဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်, စန်တာ Claus မှဆုလက်ဆောင်သေတ္တာဖွင့်ကောက်ဖို့, Rigby နှင့်မော်ဒကဲသည် mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လက်ဆောင်သေတ္တာတက်ခူးကူညီဖို့ပါ။
အဆိုပါ Ninja ရဲ့နောက်ကျောပေမယ့်တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာဤအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပ်ချုပ်သူကတဆင့်စီးနှင့်အဆုံးရောက်ရန်ကြိုးစားပါ။ သတိထားပါ!
စွန့်စားမှုအချိန်က Apple Fetch: Jake နှင့်ဖင်လန်၏အသစ်စွန့်စားမှု။ သူတို့ကို, လမ်းကြောင်းအတွက်အတားအဆီးဂရုတစိုက်ရှောင်ရှားရမည်, တစ်ခုချင်းစီအဆင့်ဆင့်၌သင်တို့၏စွန့်စားမှုဖြည့်စွက်ဖို့ကောင်းသောကံအားလုံးဘဏ္ဍာကိုစုဆောင်းကူညီပါ!
ဆိုးသောစုန်းမသူကိုကြီးစွာသောနင်ဂျာဖြစ်လာပြီးယခုအခါစာလုံးပေါင်းကိုချိုးဖျက်ဖို့သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ကိုအပြီးသတ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ရှာကြံတံ့သောနောက်, သူ့ကို sapo သို့သူ့ကိုလှည့်အပေါ်တစ်ဦးစာလုံးပေါင်းချပစ်သည်အထိ Ninja Ninja ဖား kaeru ၏ဂိမ်းထဲမှာနိုငျငံတျော၏တစ်မင်းသားခဲ့သည် PRI ပါတီ
သငျသညျဘောလုံးကြိုက်သင်တို့ရှိသမျှဥရောပအသင်းများကိုသိလျှင်, သင်သည်ဤဂိမ်းကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရုပျပုံကိုပိုငျဆိုငျသောအဖွဲ့သည်မှခန့်မှန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ mouse ကိုသုံးပါ။
တစ်လက်ထောက်အဖြစ် Play နှင့်တိုင်းရာဇဝတ်သားလိုခငျြဖမ်းယူ!